Fihazonana zava-mahadomelina, fanondranana an-tsokosoko ary fitaterana | Orinasa Mpampanoa lalàna
Fihoaram-paritry ny zava-mahadomelina, trafika ary fitaterana entana
Porofo amin'ny tranga rongony
Fatra amin'ny zava-mahadomelina
Raha sendra tratra zava-mahadomelina ianao amin'ny fanananao, tsara foana ny mahafantatra ny zonao rehetra. Hamarinin'ny polisy ny karazana porofo rehetra mba hamaritana raha nanao fahadisoana ny olona iray sy ny mety ho fisiany.
Ny zava-mahadomelina dia tery sosialy
Famonoana zava-mahadomelina mifehy
Fanafenana fananana zava-mahadomelina
Amin'ity karazana fandikan-dalàna ity, ny zava-mahadomelina dia matetika no porofo tokana izay ananana ny fanenjehana sy ny polisy.
Tsy misy na inona na inona voafaritra mazava izay azo raisina ho an'ny tena manokana. Rehefa tratra be dia be ianao, dia heverin'ny polisy fa be loatra ny filanao manokana. Azonao atao ny miampangana ny fandikan-dalàna fananana miaraka amina fikasana hametraka zava-mahadomelina. Nefa, manjary zava-dehibe ny toe-javatra misy anao manokana. Rehefa mampiasa zava-mahadomelina be dia be na be dia be ianao, dia mety hahita be lavitra kokoa aza ianao.
Famonoan-tena miaraka amin'ny finiavana hanomezana na PWITS zava-mahadomelina voafehy
Ny habetsahan'ny zava-mahadomelina azonao tamin'ny fanananao dia midika amin'ny fanenjehana sy ny polisy fa mikasa ny hanomezana olona hafa ianao. Saingy, ny habetsany dia matetika tsy ampy porofo izany. Ny tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny lalàna dia afaka mametraka anao amin'ny 'fananana zava-mahadomelina' raha toa ka mahita zavatra tsy ara-dalàna amin'ny solosaina toa an'i Hashish, LSD, Heroin, Pethidine, Remifentanil, Sufentanil, Marijuana, Methamphetamine, Spice Or K2, ecstasy, Cocaine, sns.
Hamarinin'ny polisy ny tranonao na fiara
Hamarinin'ny polisy ny tranonao na ny zavatra hafa niaraka tamin'ny fanafody. Raha hita koa ny zavatra matetika mifandray amin'ny famatsiana zava-mahadomelina dia mety midika izany fa manana tetika hanomezana na hivarotra zava-mahadomelina ianao. Ny entana toy izany dia misy kitapo fifanarahana manokana, kirany, lisitry ny mpanjifa, sarimihetsika mitambatra, vola ary hafatra an-tsoratra izay manondro fifanakalozana.
Azon'ny polisy jerena ny fonon-tanana amin'ny fonosana fanafody, indrindra rehefa milaza ianao fa tsy anao ilay fanafody. Na dia tratra zava-mahadomelina kely monja aza ianao, dia mety ho porofon'ny fanambaranao ny porofonao. Ohatra, rehefa ilazanao amin'ny polisy fa manana pilina tsy ara-dalàna ho an'ny namanao ianao dia azo ampiasaina amin'ny fametrahana tanjona ho famatsiana.
Famatsiana fanafody mifehy
Ny habetsahan'ny zava-mahadomelina dia tsy zava-dehibe rehefa tratra ianao nandritra ny famatsiana azy ireo. Mbola azo omena trosa ihany ianao na dia manome fanafody kely amin'ny olon-kafa aza.
Hitan'ny manam-pahefana fa hitady karazana porofo toa ny fananana izy ireo. Na izany aza, satria ny fandefasana tena izy dia tokony hanao porofo hafa. Mety ho fakan-tsary miafina na CCTV na tompon'andraikitra miafina any amin'ny faritra fantatra fa mpamatsy fanafody. Mety mampiasa fitaovana fihainoana ihany koa izy ireo na famotopotorana amin'ny firaketana resaka. Ohatra tsara ao anaty ny fiara voan'ny suspect. Ny firaketana an-tsoratra toy izany dia mety ho porofon'ny fitsarana. Saingy, tsy mahazo manelingelina ny resaka amin'ny telefaona ny polisy.
Mpikambana ambanin'ny tany
Ny manamboninahitra iray ihany koa dia mety mody ho toy ny olona mividy zava-mahadomelina fotsiny mba hanaporofoana fa mivarotra zava-mahadomelina ny olona iray. Matetika mampiasa ilay mikrô na fakantsary miafina ilay tompon'andraikitra izay handrakitra ny fifanarahana manontolo. Tsy afaka mandresy lahatra na hanery olona hanao fahadisoana ny manamboninahitra ambanin'ny tany. Hoheverina ho toy ny fisamborana, miaraka amin'ilay olona manao izany fandikan-dalàna izany satria namporisika azy hanao izany ny birao.
Ny porofo hafa ampiasaina amin'ny raharaha zava-mahadomelina dia misy ny porofo amin'ny telefaona finday, ny famokarana ny fanafody voafehy, ary ny famokarana na ny fambolena cannabis.
Ahoana no fomba hiadiana amin'ny saran'ny famotehana ny zava-mahadomelina
Mety ho sarotra ny miady amin'ny fiampangana fananana. Saingy, azo atao ny miady fiampangana tahaka izany raha manana mpisolovava tsara indrindra eo anilanao ianao.
Ny fangatahana antontan-taratasy sy ny fandroahana azy ary ny karazana fangatahana samihafa dia manala ireo mpampanoa lalàna amin'ny farany. Aleony mandany ny fiampangana na hampihena ny sazy fa tsy manohy manao asa be amin'ny tranga kely.
Amin'ny sehatra maro, ity karazana fomba ity dia mety hiafara amin'ny fiampangana. Raha tsy manome fitaovana sasany ny mpampanoa lalàna mandritra ny fitadiavana, dia mety hangataka ny fanendrena azy ny voampanga. Indraindray, raha tsy mahomby io fomba fiasa io noho ny antony itadiavan'ny mpampanoa lalàna ny raharaha dia mety hahomby ihany ilay izy.
Amin'ny sehatra sasantsasany dia azo atao ny mamakivaky ny programa diversion. Ny fandaharan'asa toy izany dia ahafahana manao fanarenana sy mandoa vola na resy lahatra. Rehefa vita ny fahombiazan'ny fandaharan'asa fanitsiana dia mihena amin'ny fomba ofisialy ny fiampangana sy ny firaketana resy lahatra. Ity safidy ity dia mila ny voampanga hijanona ho hendry satria miverina ny sazy heloka bevava raha vao voampanga ny fandaharan'asa fitsaboana.
Fanamby hoe ahoana ny porofo
Amin'ny tranga hafa, mety mila miady amin'ny tranga momba anao ianao. Mety ho vita amin'ny alàlan'ny fanamby ny fomba nahazoana porofo izany. Azonao atao ny manomboka manomboka amin'ny fiezahana maneho fa tsy manana antony mety hitadiavana ilay raharaha na ho an'ny fiatoana. Amin'ny ankapobeny, ny faritra malemy indrindra amin'ny raharaha ny mpampanoa lalàna. Ny mpiandraikitra dia mangataka ny hikaroka, kanefa mampiasa fehezanteny na feo izy ireo, toa tsy misy safidy izany. Io no fomba tsara indrindra hilazana fa tsy eo amin'ny fikarohana raha mbola azonao atao fa tsy voasambotra noho ny sakana na manohitra ny fisamborana. Raha tadiavin'ny mpiambina tsy misy antony marim-pototra, ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alalana anao, ny porofo dia tsy azo ekena amin'ny fitsarana.
Ny fahalemena hafa dia ny fananganana fa manana fananana mahasoa. Midika izany fa ny toe-javatra dia toa hita fa fanananao ny fananana, nefa tsy anao ny anao. Mety ho nisambotra ny fiara alain'ny namanao ianao mba handeha hitondra any amin'ny fivarotana. Rehefa avy nitaona azy noho ny fanitsakitsahana ny fifamoivoizana dia mahita antony mety hitadiavana ilay fiara ny manampahefana. Ny zava-mahadomelina hita mandritra ity fikarohana ity dia tsy mety ho anao fa tsy anao. Koa satria nindramina fotsiny ilay fiara, dia sarotra ho porofoina ny fahazoana zava-mahadomelina mihoatra ny fisalasalana mitombina.
Porofoy fa zava-mahadomelina ny akora
Raha toa ka tsy safidy ny fiarovana ny lasa, ny fiarovan-tena manaraka dia manohana ny mpampanoa lalàna manaporofo fa fanafody ny zava-mahadomelina. Ny tatitra momba ny laboratoara miady hevitra ary koa manohitra ny famantarana ny vokatra dia midika fa tsy maintsy manaporofo ny mpampanoa lalàna fa zava-mahadomelina tsy misy fisalasalana mihintsy izany. Ity aretin'andoha ity ho an'ny mpampanoa lalàna dia mampiakatra ny vola sy ny fotoana lany amin'ny raharaha. Ankoatr'izay dia misy matetika ny raharaha momba ny heloka bevava. Manonofy bureaucratic ho an'ny mpampanoa lalàna satria mila fandaharam-potoana amin'ny teknolojia lab izy ireo mba hipoitra eo amin'ny fitsarana ary hanangana ny andro tsy andehanan'ny tekinika.
Maninona raha hifandraisa amin'ny mpisolovava za-draharaha iray hanampy amin'ny ady amin'ny fiampangana zava-mahadomelina?
Ny fitantanana ny rafi-pitsarana heloka bevava any UAE dia mety handrava izaitsizy tokoa. Na lasibatry ny famotopotorana ianao, na voarohirohy tamina asa ratsy na heloka bevava, na manahy ianao sao voampanga, dia mila matoky ianao fa sady mavitrika no tapa-kevitra amin'ny ezaka ataonao hiarovana ny zonao ara-dalàna.
Raha miatrika na miady amin'ny fiampangana zava-mahadomelina ianao, dia fahendrena foana ny mamela ny mpisolovava hanao ilay asa ho anao. Safidio fotsiny ilay olona manana traikefa an-taonany sy manam-pahaizana amin'ny tranga mifandray amin'ny fiampangana toy izany. Amin'izany fomba izany, afaka matoky ianao fa ho afaka hiady amin'ny fiampangana toy izany.
Fiharian-drongony sy fanjifana manokana
Afaka manampy anao ny mpisolovava amin'ny heloka bevava.